ကိုယ်ဝယ်လိုက်မိတဲ့ အရာတွေကို ပြန်ကြည့်လိုက်မိတော့ တောက်ရှက်ကွဲတာနည်းတောင်နည်းသေးတယ်... - APANNPYAY
/ ကိုယ်ဝယ်လိုက်မိတဲ့ အရာတွေကို ပြန်ကြည့်လိုက်မိတော့ တောက်ရှက်ကွဲတာနည်းတောင်နည်းသေးတယ်...
ကိုယ်ဝယ်လိုက်မိတဲ့ အရာတွေကို ပြန်ကြည့်လိုက်မိတော့ တောက်ရှက်ကွဲတာနည်းတောင်နည်းသေးတယ်...
ဗယ်လင်တိုင်းဒေးဆိုလို့ စင်္ကာပူမှာနေတုန်းက အဖြစ်အပျက်ကလေးတစ်ခုကို သွားသတိရမိတယ်။
အဲ့ဒီတုန်းက ဒီကနေ့မှာ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၄ ရက်နေ့ ဆိုရင် မှတ်မှတ်ရရ မနေ့ကလိုနေ့မှာ လက်မောင်း တက်တူးသွားထိုး ဖြစ်ခဲ့တယ်လေ။
ပထမဆုံး ထိုးတာဆိုတော့ တစ်ညလုံး လက်မောင်းက ကိုက်လိုက်တာဗျာ။ မနက်အထိကို တက်တူးအနာကြောင့် လက်က စပ်ဖျဉ်းဖျဉ်းဖြစ်နေတယ်။
အဲ့ဒါနဲ့ တစ်ခန်းထဲ အတူနေတဲ့ အစ်ကိုက အကြံပေးတယ်။ ဗက်ဆယ်လင်း ချောဆီ လိမ်းလိုက်ရင် တက်တူး အနာ သက်သာ တယ်တဲ့။
ဟာ.. ဟုတ်လားပေါ့။ ပျော်သွားတယ်။ အဲ့ဒါနဲ့ လမ်းထိပ်က Fair Price မှာ ဆေးဘူး သွားဝယ်ဖို့ လုပ်တယ်။
ကိုယ်တွေ နေတဲ့တိုက်က Bedok ဟိုးအထဲမှာ ဆိုတော့ လမ်းထိပ် တစ်ခါတစ်ခါ ထွက်ရင် အဝေးကြီး သွားရတာမျိုးဗျ။ ဒီတော့လည်း အတူနေတဲ့ လူတွေ ကို ဘာမှာဦးမလဲ တစ်ခါထဲမှာဖို့ ပြောတာပေါ့။
အစ်ကို တစ်ယောက်က သူဆံပင်ဆေးဆိုးဖို့ ဆေးဘူးဝယ်လာတာ လက်အိတ် ဝယ်ဖို့ မေ့ခဲ့လို့တဲ့။ အဲ့ဒါ လက်အိတ် တစ်ခု မှာတယ်။
နောက် ဟင်းချက် တာဝန်ယူထားတဲ့ တစ်ယောက်က ကျတော့ တို့စရာ ကုန်နေလို့ တစ်ခုခု ကြည့်ဝယ်ခဲ့ဖို့ မှာတယ်။
အဲ့ဒါနဲ့ Fair Price ရောက်ရော။ ဟိုကျတော့ ဗက်ဆယ်လင်း တစ်ဘူး ယူ၊ Latex လက်အိတ် တစ်ခုယူပြီး နောက်ဆုံး အသီးအရွက် တန်းဘက် ထွက်လာခဲ့တယ်။
ပြောရဦးမယ်။ ကိုယ်တွေက ငယ်ငယ်ကထဲက သခွားသီးဆို သိပ်ကြိုက်တာ။ ခုထိလည်း ကြိုက်တုန်းပဲ။ အာ့နဲ့ အသီးအရွက် တန်း ရောက်တော့ မျက်လုံးထဲ ပထမဆုံး ဝင်လာတာ သခွားသီးပဲ။ ဒါပဲ ပြေးမြင်မိတော့ ဟုတ်ပြီ! သခွားသီးပဲ ဝယ်မယ်! လို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။
အဲ့တော့ သခွားသီး တစ်လုံး ကောက်ယူပြီး ပိုက်ဆံရှင်းဖို့ ကောင်တာဘက် ထွက်လာခဲ့လိုက်တယ်။ ငွေရှင်းကောင်တာ ရှေ့ရောက်တော့ ကောင်တာ ဝန်ထမ်းဆီက “ဟမ်” ဆိုတဲ့ အသံ မကျယ်တကျယ် ထွက်လာတယ်။
ကိုယ်လည်း ဘာများဖြစ်လို့လဲလို့ သူ့မော့ကြည့်တော့ ချက်ချင်း ရယ်ချင်တဲ့ မျက်နှာကို ထိန်းလိုက်တယ်ဗျ။ မြင်တယ်! ကိုယ်တွေကလည်း အာ့မျိုးဆို သွက်သလား မမေးနဲ့။ ကိုယ့်ကို ပြောင်တာလှောင်တာဆို သိပ်ဖမ်းတတ်တာ။
ဘာများဖြစ်လို့လဲလို့ မေးတော့ “nothing nothing” တဲ့။ ခပ်ပြုံးပြုံးနဲ့။ သူကသာ nothing လုပ်နေတယ်။ သူ့အသံ ကြားလို့ ဘေးက ဝိုင်းကြည့်တဲ့လူတွေတောင် မသိမသာ ပြုံးကုန်ကြပြီ။ (တကယ့်ကို မသိမသာဗျာ။ လိုက်ကြည့်တဲ့မျက်နှာတိုင်း ဟိုလွှဲ ဒီလွှဲနဲ့…!)
အာ့နဲ့ ကိုယ့်ပုံက ရယ်စရာများ ဖြစ်နေလို့လားလို့ မလုံမလဲနဲ့ ပြန်ကြည့်မိတယ်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ကြည့်လိုက် သူတို့ ရယ်ချင်ပုံကြည့်လိုက် တွေးလိုက်နဲ့.. နောက်ဆုံး “ဟာ… သွားပြီပေါ့!”
အဓိပ္ပာယ်ပေါ်လာတဲ့အချိန်မှာ ကိုယ့် မျက်နှာက ဇီးစေ့လောက်ပဲ ရှိတော့တယ်။ ရှက်ရှက်နဲ့… ငွေမြန်မြန် ရှင်းပြီး ခပ်သုတ်သုတ် ပြန်ပြေးလာခဲ့ရတယ်ဗျာ။
သူတို့ကတော့ ဘယ်လိုထင်လို့ ပြုံးတယ်မသိ။
အဲ့ဒီတုန်းက လက်မောင်း နာနေတော့ စွပ်ကျယ် ဝတ်လာတယ်။ ပြီးတော့ စွပ်ကျယ်က နည်းနည်း ကျပ်ချင်ချင်ရယ်။
ဗယ်လင်တိုင်းဒေးမှာ… တစ်ယောက်ထဲ ဈေးလာဝယ်တယ်။ ကောင်တာမှာ ယူဖို့ တင်ထားတာက ရာဘာလက်အိတ်ရယ်၊ သခွားသီးရယ်…. ချောဆီရယ်… ရှေ့မှာ လက်မောင်း နာလို့ လိမ်ကောက်နေတဲ့ ကိုယ်ရယ်…။
ကဲ… စဉ်းစားသာ ကြည့်တော့ဗျာ!
#kyawnge — feeling naughty.
ဗယျလငျတိုငျးဒေးဆိုလို့ စင်ျကာပူမှာနတေုနျးက အဖွဈအပကျြကလေးတဈခုကို သှားသတိရမိတယျ။
အဲ့ဒီတုနျးက ဒီကနမှေ့ာ ဖဖေျောဝါရီ ၁၄ ရကျနေ့ ဆိုရငျ မှတျမှတျရရ မနကေ့လိုနမှေ့ာ လကျမောငျး တကျတူးသှားထိုး ဖွဈခဲ့တယျလေ။
ပထမဆုံး ထိုးတာဆိုတော့ တဈညလုံး လကျမောငျးက ကိုကျလိုကျတာဗြာ။ မနကျအထိကို တကျတူးအနာကွောငျ့ လကျက စပျဖဉျြးဖဉျြးဖွဈနတေယျ။
အဲ့ဒါနဲ့ တဈခနျးထဲ အတူနတေဲ့ အဈကိုက အကွံပေးတယျ။ ဗကျဆယျလငျး ခြောဆီ လိမျးလိုကျရငျ တကျတူး အနာ သကျသာ တယျတဲ့။
ဟာ.. ဟုတျလားပေါ့။ ပြျောသှားတယျ။ အဲ့ဒါနဲ့ လမျးထိပျက Fair Price မှာ ဆေးဘူး သှားဝယျဖို့ လုပျတယျ။
ကိုယျတှေ နတေဲ့တိုကျက Bedok ဟိုးအထဲမှာ ဆိုတော့ လမျးထိပျ တဈခါတဈခါ ထှကျရငျ အဝေးကွီး သှားရတာမြိုးဗြ။ ဒီတော့လညျး အတူနတေဲ့ လူတှေ ကို ဘာမှာဦးမလဲ တဈခါထဲမှာဖို့ ပွောတာပေါ့။
အဈကို တဈယောကျက သူဆံပငျဆေးဆိုးဖို့ ဆေးဘူးဝယျလာတာ လကျအိတျ ဝယျဖို့ မခေဲ့လို့တဲ့။ အဲ့ဒါ လကျအိတျ တဈခု မှာတယျ။
နောကျ ဟငျးခကျြ တာဝနျယူထားတဲ့ တဈယောကျက ကတြော့ တို့စရာ ကုနျနလေို့ တဈခုခု ကွညျ့ဝယျခဲ့ဖို့ မှာတယျ။
အဲ့ဒါနဲ့ Fair Price ရောကျရော။ ဟိုကတြော့ ဗကျဆယျလငျး တဈဘူး ယူ၊ Latex လကျအိတျ တဈခုယူပွီး နောကျဆုံး အသီးအရှကျ တနျးဘကျ ထှကျလာခဲ့တယျ။
ပွောရဦးမယျ။ ကိုယျတှကေ ငယျငယျကထဲက သခှားသီးဆို သိပျကွိုကျတာ။ ခုထိလညျး ကွိုကျတုနျးပဲ။ အာ့နဲ့ အသီးအရှကျ တနျး ရောကျတော့ မကျြလုံးထဲ ပထမဆုံး ဝငျလာတာ သခှားသီးပဲ။ ဒါပဲ ပွေးမွငျမိတော့ ဟုတျပွီ! သခှားသီးပဲ ဝယျမယျ! လို့ ဆုံးဖွတျလိုကျတယျ။
အဲ့တော့ သခှားသီး တဈလုံး ကောကျယူပွီး ပိုကျဆံရှငျးဖို့ ကောငျတာဘကျ ထှကျလာခဲ့လိုကျတယျ။ ငှရှေငျးကောငျတာ ရှရေ့ောကျတော့ ကောငျတာ ဝနျထမျးဆီက “ဟမျ” ဆိုတဲ့ အသံ မကယျြတကယျြ ထှကျလာတယျ။
ကိုယျလညျး ဘာမြားဖွဈလို့လဲလို့ သူ့မော့ကွညျ့တော့ ခကျြခငျြး ရယျခငျြတဲ့ မကျြနှာကို ထိနျးလိုကျတယျဗြ။ မွငျတယျ! ကိုယျတှကေလညျး အာ့မြိုးဆို သှကျသလား မမေးနဲ့။ ကိုယျ့ကို ပွောငျတာလှောငျတာဆို သိပျဖမျးတတျတာ။
ဘာမြားဖွဈလို့လဲလို့ မေးတော့ “nothing nothing” တဲ့။ ခပျပွုံးပွုံးနဲ့။ သူကသာ nothing လုပျနတေယျ။ သူ့အသံ ကွားလို့ ဘေးက ဝိုငျးကွညျ့တဲ့လူတှတေောငျ မသိမသာ ပွုံးကုနျကွပွီ။ (တကယျ့ကို မသိမသာဗြာ။ လိုကျကွညျ့တဲ့မကျြနှာတိုငျး ဟိုလှဲ ဒီလှဲနဲ့…!)
အာ့နဲ့ ကိုယျ့ပုံက ရယျစရာမြား ဖွဈနလေို့လားလို့ မလုံမလဲနဲ့ ပွနျကွညျ့မိတယျ။ ကိုယျ့ကိုယျကို ကွညျ့လိုကျ သူတို့ ရယျခငျြပုံကွညျ့လိုကျ တှေးလိုကျနဲ့.. နောကျဆုံး “ဟာ… သှားပွီပေါ့!”
အဓိပ်ပာယျပျေါလာတဲ့အခြိနျမှာ ကိုယျ့ မကျြနှာက ဇီးစလေ့ောကျပဲ ရှိတော့တယျ။ ရှကျရှကျနဲ့… ငှမွေနျမွနျ ရှငျးပွီး ခပျသုတျသုတျ ပွနျပွေးလာခဲ့ရတယျဗြာ။
သူတို့ကတော့ ဘယျလိုထငျလို့ ပွုံးတယျမသိ။
အဲ့ဒီတုနျးက လကျမောငျး နာနတေော့ စှပျကယျြ ဝတျလာတယျ။ ပွီးတော့ စှပျကယျြက နညျးနညျး ကပျြခငျြခငျြရယျ။
ဗယျလငျတိုငျးဒေးမှာ… တဈယောကျထဲ စြေးလာဝယျတယျ။ ကောငျတာမှာ ယူဖို့ တငျထားတာက ရာဘာလကျအိတျရယျ၊ သခှားသီးရယျ…. ခြောဆီရယျ… ရှမှေ့ာ လကျမောငျး နာလို့ လိမျကောကျနတေဲ့ ကိုယျရယျ…။
ကဲ… စဉျးစားသာ ကွညျ့တော့ဗြာ!